Weerar Askar looga Dilay Dowladda Federaalka oo Ka Dhacay Duleedka Degmada Balcad.
Monday September 11, 2017 - 12:39:31 in Wararka by Super Admin
Khasaara Xooggan ayaa ka dhashay weerar Ciidamo katirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya lagula eegtay gobolka Shabeelaha dhexe.
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Balcad ayaa sheegaya in weerarka lala helay gaari ay ciidamo melleteri ah la socdeen waxaana weerarkaasi ku dhintay ugu yaraan Afar askari sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoonyahay.
Weerarka oo ahaa mid dhabagal ah ayaa la sheegay in ciidamada Al Shabaab ay ku qabsadeen qori daba jeex ah (PKM) kaasi oo uu watay askari katirsan Ciidanka DF-ka oo isagoo Meyd ah ka dhacay gaariga weerarku qabsaday.
Dhimashada ayaa maanta gelinkii dambe gaartay Afar Askari waxaana la xaqiijiyay in Meydadka ciidamada lagu arkay wadada iyo gaari Cabdi Bile ah oo gubanaya, Al Shabaab ayaa ghaniimeystay qori daba miinshaar ah iyo sedax qori AK47 ah sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoonyahay.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in maanta duhurkii ay daryanka rasaasta iyo madaafiic xooggan oo lays dhaafsanayay ka maqleen deegaanno dhaca duleedyada magaalada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Wadada laamiga ah ee xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ayaa qarka usaaran in ay ka caagaan mas'uuliyiinta iyo saraakiisha DF-ka sababa la xiriira weerarada iyo qaraxyada ay dhigaan xoogaga Al Shabaab oo kusii badanaya.